Famaritana Angst (Physique et Chemie)
Ahoana no nahatonga ny Angstrom ho tonga fanabeazana?
Ny angstrom na ångström dia singa iray lava ampiasaina handrefesana ny halavirany kely. Ny angstrom iray dia mitovy 10-10 m (iray metatra amina metatra na 0,1 nanometers ). Na dia ekena eran-tany aza izy io, dia tsy an'ny International System ( SI ) na ny metric metric.
Ny marika ho angstrom dia Å, izay taratasy ao amin'ny abidia soedoà.
1 Å = 10 -10 metatra.
Ny diametran'ny atoma dia eo amin'ny lamosin'ny angstroma 1, noho izany dia tsara kokoa ny singa rehefa miresaka ny elanelana atomika sy ionika na ny molekiola ary ny elanelana eo amin'ny planeta atôma amin'ny kristaly .
Ny voka-dratsin'ny atoman'ny chlor, ny solifara ary ny phosphor dia manodidina ny angstrom, raha ny habeny atomôma atiny kosa dia eo amin'ny antsasaky ny angstrom. Ny angstrom dia ampiasaina amin'ny fizika matanjaka, ny simia, ary ny kristaly. Ireo singa ireo dia ampiasaina hanondro ny halavan'ny andrefan'ny hazavana, ny halavan'ny simenitra, ary ny haben'ireo rafitra mikrosopia mampiasa ny mikrôseta elektronika. Azo atao amin'ny angstroma ny lamosina rantsam-batana, satria arakaraka an'io sanda io ny 1-10 Å.
Nantsoina ho an'ny mpahay fizika soedoà Anders Jonas Ångström, izay nampiasa azy io mba hamokarana tabilao ny elanelam-potoan'ny taratra electromagnetique amin'ny hazavana masoandro tamin'ny taona 1868. Ny fampiasana tarika dia nahafahana nanambara ny halavan'ny fahazavana hita maso (4000 hatramin'ny 7000 Å) Tsy maintsy mampiasa zana-tsokajy na tahiry. Ny tabilao sy ny tarika dia nanjary nampiasaina betsaka tao amin'ny fikajan'ny masoandro, ny spektroskopie atomika ary ny siansa hafa izay mifandray amin'ny rafitra kely .
Na dia 10 -10 metatra aza ny angstrom, dia voafaritra tsara ny fari-pitsipika manokana satria kely izany. Ny hadisoana ao amin'ny metatra metatra dia lehibe noho ny onstrom unit! Ny famaritana ny angstrom tamin'ny 1907 dia ny filahatry ny kodiarana mena natao ho 6438.46963 international ångströms.
Tamin'ny taona 1960, ny faneva ho an'ny metatra dia novolavolaina amin'ny resaka spektroskopie, farany mametraka ireo singa roa amin'ny famaritana mitovy.
Maro ny Angstrom
Ny singa hafa mifototra amin'ny angstrom dia ny micron (10 4 Å) ary ny millimicron (10 Å). Ireo singa ireo dia ampiasaina handrefesana ny hatevin'ny sarimihetsika matevina sy ny molekiolan'ny diameters.
Manoratra ny Angstrom Symbol
Na dia mora aza ny manoratra amin'ny taratasy, ny mari-pamantarana amin'ny angstrom dia ilaina ny codecode mba hamoahana izany amin'ny fampitam-baovao nomerika. Ao amin'ny taratasy tranainy, dia ny fampiasana ny "AU" indraindray. Ny fomba fanoratana ny marika dia ahitana:
Manondro ny marika U + 212B na U + 00C5 amin'ny Unicode
Mampiasa ny marika & # 8491 na & # 197 amin'ny HTML
Mampiasa ny code & Aring; amin'ny HTML
Famaritana ao amin'ny Chemistry
Famaritana ny andian-tantara
Famaritana mazava tsara amin'ny siansa
Famaritana ny fandroana
Space Oddities: kintana am-po
Ny anjara asan'ny Governoran'i Canada
Ny dikany maro amin'ny teny frantsay momba ny fanontana frantsay
Momba ny Hayward Fault any Californie
Review: Bridgestone Dueler H / P Sport AS
Miasa amin'ny soroka mitambolimbolina
Top 10 Country Songs ho an'ny Reny
Ny vadin'i Apollo, ny vady aman-janany
Ady faharoa: Operation Pastorius
Mitady gisengy Amerikana any amin'ny alan'i Eoropa
CLARK - Ny dikan'ny anarana sy ny fiandohana
Ny fiantraikan'ny volana eo amin'ny famantarana famantarana anao
Famaritana ny tsy fisian'ny atheist
Galatiana 4: Famintinana ny Baiboly
Fikarakarana rindrambaiko ho an'ny mpianatra
Ny Styling Skiing dia manolotra safidy maro isan-karazany
Inona no sary?
Fomba hanomezana tanjaka ny fanahiana
Mpitarika ny mpilatsaka an-tsokosoko ho an'ny Wr Wrling - Wrestling 101
Recible Slime Recipe